बारापर्सामा भीषण हावाहुरी : मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो, ६ सय भन्दा बढी घाइते ! - बारापर्सामा भीषण हावाहुरी : मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो, ६ सय भन्दा बढी घाइते !
बारापर्सामा भीषण हावाहुरी : मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो, ६ सय भन्दा बढी घाइते !
२०७५, १८ चैत्र, 07:22:41 AM
बारा । आइतबार साँझ एक्कासी आएको हावाहुरी र असिनापानीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुगेको छ भने ६ सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् । इँटाभट्टाको चिम्नी लडाउनुका साथै गुड्दै गरेको गाडी पल्टिएर तथा विजुलीको पोल ढलेर करेन्ट लाग्दा धेरै मानवीय क्षति भएको छ।
बाराको कलैया लगायत दक्षिण भेगमा हावाहुरीले धेरै असर पुर्याएकाे बताइएको छ । अचानक आएको हावाहुरीका कारण बारापर्सा र आसपासका जिल्ला धेरै प्रभावित भएको छ । घाइतेहरुको जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलका अनुसार अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरी उद्धार गर्न आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ ।
यता उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीय तथा सर्वसाधारण र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु घाइतेहरुलाई रगतको अभाव नहोस भनेर रगत संकलनमा जुटेका छन्।
बारामा हावाहुरीको कहर : २५ जनाको मृत्यु, ४०० बढी घाइते !